"६'बर्षीय एक बा'लक स'माजिक संजालमा अहिले निकै चर्चित भएका छन । लियोनल मेस्सीका संसारभर धेरै फ्यानहरु रहेका छन ति मध्ये एक हुन ईरानका अरत होसैनी । उनी सामाजिक संजालमा करिब २०१७ देखीनै भाईरल भएका हुन" - PARIJATMEDIA
“६’बर्षीय एक बा’लक स’माजिक संजालमा अहिले निकै चर्चित भएका छन । लियोनल मेस्सीका संसारभर धेरै फ्यानहरु रहेका छन ति मध्ये एक हुन ईरानका अरत होसैनी । उनी सामाजिक संजालमा करिब २०१७ देखीनै भाईरल भएका हुन”
६ बर्षीय एक बालक समाजिक संजालमा अहिले निकै चर्चित भएका छन । लियोनल मेस्सीका संसारभर धेरै फ्यानहरु रहेका छन ति मध्ये एक हुन ईरानका अरत होसैनी । उनी सामाजिक संजालमा करिब २०१७ देखीनै भाईरल भएका हुन ।
अरत मेस्सीका फ्यान भएपनि उनको शरीर रोनाल्डोको जस्तो छ । ६ बर्षकै उमेरमा उनको सिक्स प्याक एब्स देखेर जोकोही अचम्म हुन्छ ।
अरतको आफ्नै ईन्स्टाग्राम अकाउन्ट रहेको छ । जाहा उनले फुटबल स्किल र आफ्नो सिक्स प्याक संग जोडिएका तस्विर र भिडीयोहरु सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन । ईन्स्टाग्राममा उनको ३.९ मिलीयन फ्यानहरु रहेका छन । प्रायजसो भिडीयोमा उनले बार्सिलोनाको जर्सी नम्बर १० लगाएका हुन्छन र मेस्सीको जर्सी नम्बरपनि १० नै हो ।
मेस्सीले सोसल मिडियामा अरतसंग कुराकानी गरेका छन र उनले अरत ठुलो भएपछि बार्सिलोना संग जोडिने विश्वास गरेका छन । मेस्सीले अरतको खेल्ने तरिकालाई एक अलगै किसिमको खेल भनेका छन ।
अरतकाका बुबा, जसले अरतको व्यवस्थापन गर्छन्, उनको छोरा मेस्सीको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक हो र दिन रात बार्सिलोनामा सम्मिलित हुने सपना देखेको बताउछन । उनले फुटबलको संसारमा आफ्नो भविष्य देख्दै यसको लागि कडा परिश्रम गरेका छन्।
Prevके श्रीमतीलाई यौ’नस’म्पर्कमा रूचि छैन् ? यस्ता छन् आकर्षित गर्ने ५ तरिका !
nextकसिलो सम्वन्धः हरेकले जान्नैपर्ने १० टिप्स !